Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Iza na inona i Satana?
Amin'ny alàlan'ny fakampanahy sy ny fitarihan'ny fiaraha-monina eo ambany fifehezany, i Satana dia manandrana mamporisika ny kristiana hanalavitra ny tenany amin'Andriamanitra. Ny mpino iray manasaraka ny tenany amin'ny faniriany malalaka hanota amin'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fanarahana ny toetran'ny olombelona mpanota, manaraka ny fomba ratsin'i satana ary manaiky ny fisolokiany maro (Matio 4,1-10; 1 Jaona 2,16-17; 3,8; 5,19; Efesiana 2,2; Kolosiana 1,21; 1 Petera 5,8: 3,15; Jak.).
Ny fomba fijery toy izany dia tsy araka ny Baiboly. Tsy misy ny ady mitohy ho an'ny fanapahana an'izao tontolo izao amin'ny herin'ny maizina, tarihin'i Satana, ary ny herin'ny tsara, tarihin'Andriamanitra. Mpahary noforonina fotsiny i Satana, manohana tanteraka an'Andriamanitra, ary manana fahefana ambony indrindra Andriamanitra. Jesosy dia nandresy tamin'ireny fitak'i Satana rehetra. Amin'ny finoana an'i Kristy dia efa nahazo fandresena isika, ary manana fahefana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra (Kolosiana 1,13:2,15; 1:5,4; 93,1 Jaona 97,1; Salamo 1: 6,15; 19,6; Timoty; Apokalipsy).